Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Seranam-piaramanidina Frankfurt: hisokatra ny 2 Jona ny Terminal 1
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • fanorenana • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Nikatona ho an'ny fifamoivoizana ny Terminal 2 nanomboka ny volana martsa 2020, noho ny fihenan'ny sidina ateraky ny areti-mandringana.
Seranam-piaramanidina 48 vonona hanomboka amin'ny Terminal 2
Mpivezivezy sy serivisy fitateram-bahoaka ny Sky Line hivezivezy eo anelanelan'ny terminal roa indray
Downtime ampiasaina amin'ny fomba mahomby amin'ny fanavaozana sy fanamboarana be dia be
Seranam-piaramanidina FrankfurtNy Terminal 2 dia hisokatra ny varavarany indray amin'ny talata 1 jona. Ny toeram-piantsonan'ny terminal 2 sy ny Sky Line ary ny fifandraisana bus bus dia manome serivisy mahazatra indray. Vokatr'izany, ny mpandeha miainga avy amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt amin'ny 1 Jona na tokony hanamarina mialoha ny terminal aiza no hiaingan'izy ireo.
"Faly izahay milaza fa, afaka herintaona mahery, hisokatra indray ny Terminal 2," hoy i Sascha König, izay mitarika Fraport AGSampana fitantanana loharanom-pahalalana terminal. “Izany dia hametraka antsika amin'ny toerana tsara handaminana ny fisondrotan'ireo volan'ny mpandeha mandritra ny volana fahavaratra ho avy. Mazava ho azy fa manao izay rehetra azo atao izahay mba hisorohana ny aretina sy hiarovana ny fahasalaman'ny mpandeha sy ny mpiasanay ao amin'ny Terminal 2. ”
Ny fepetra feno momba ny fahasalamana dia nampiharina mba hanomanana tsara ny Terminal 2: ao anatin'izany ny fanamarihana gorodona 3,000, fizarana fizarana 480 napetraka tao amin'ireo kaontera fisavana, fanakanana ireo seza hafa rehetra eny amin'ny faritra iandrasana, ary fametrahana ireo dispenseran'ny famonoana otrikaretina 30. "Anjaran'ny tsirairay ny manaraka ny lalàna momba ny fisorohana ny aretina", hoy i König nanantitrantitra.
Manomboka amin'ny 1 Jona, ny toeram-piantsonana Terminal 2 dia hiasa tanteraka ihany koa ary azo ampiasaina. Satria mpandeha maro kokoa izao no mitondra fiara mankany amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny fiarany noho ny areti-mandringana ankehitriny, dia ampirisihina mafy ny hamandrika toerana fijanonana mialoha. Filazana manan-danja: Ireo mpandeha izay efa namandrika hametraka ny fiantsonana Terminal 1, nefa izao dia hiala amin'ny Terminal 2 dia tsy mila mandray andraikitra. Ny kaody QR efa noraisin'izy ireo dia azo ampiasaina handehanana mankany amin'ny garazy ambanin'ny tany P8 sy P9 ao amin'ny Terminal 2.
Mifanindry amin'ny fisokafan'ny terminal, trano fisakafoanana sasany sy serivisy hafa ihany koa no hanompo ireo mpandeha sy mpitsidika. Toy ny ao amin'ny Terminal 1, ireo fivarotana antsinjarany sy sakafo ireo dia iharan'ny fepetra ara-dalàna amin'izao fotoana izao, mifantoka voalohany amin'ny fanomezana izay ilain'ny mpandeha. Hotanterahina ny famatsian-tsakafo sy zava-pisotro, fa amin'ny alalàn'ny fitadiavana mandra-pahatongan'ny fampandrenesana manaraka ihany. Mety hohanina na aiza na aiza ny sakafo sy zava-pisotro. Na izany aza, rehefa manaisotra ny takelaka fisakafoanana na fisotroana izy ireo dia angatahina ny mpandeha sy ny mpitsidika mba hitazona elanelana ampy amin'ny hafa.
Ho fanampin'ny trano fisakafoanana sy toeram-pisakafoanana, hisokatra ny fivarotana mivarotra gazety sy gazety. Ao amin'ny faritra fitaterana dia afaka mankafy ny fivarotana Duty Free sy Travel Value. Ny vokatra madiodio dia azo vidiana amin'ny magazay sy amin'ny alàlan'ny milina fivarotana. Ny serivisy hafa misy dia misy ny fivarotam-panafody, fifanakalozam-bola, famerenam-bola, haba, ary koa serivisy fanofana fiara. Lisitra iray (havaozina isan'andro) an'ireo fivarotana sy trano fisakafoanana misokatra ao amin'ny Terminal 2, ao anatin'izany ny fampahalalana momba ny ora fiasan'izy ireo sy ny fotoana azo tsindriana "tsindrio & manangona", dia hita ao amin'ny tranokalan'ny seranam-piaramanidina FRA.
Ny Terrace mpitsidika ao amin'ny Terminal 2 dia hikatona mandritra izao fotoana izao. Vonona ny seranam-piaramanidina Frankfurt hanokatra io sehatra fizahana malaza io amin'ny volana Aogositra.
Nikatona ho an'ny fifamoivoizana ny Terminal 2 nanomboka ny volana martsa 2020, noho ny fihenan'ny sidina ateraky ny areti-mandringana. Fraport, mpitantana ny seranam-piaramanidina, dia nampiasa tsara tamin'ity indray mitoraka ity mba hanaovana fanavaozana, fanamboarana ary fanavaozana maodely ny tetikasa Terminal 2, izay notokanana tamin'ny taona 1994. Ny efitrano malalaky ny terminal izao dia mamirapiratra amin'ny jiro vaovao ihany koa, noho ny fametrahana 3,136 takelaka fitaratra vaovao ao amin'ny tafo dimy amin'ny tampon'ny terminal. Amin'ny faran'ity taona ity dia hosoloina 5,550 m² ny tafo asfalta sy mpizara fizaran-tany mirefy 2,440 m². Ny rafitra teknika terminal, tariby ary rafitra elektrika rehetra dia natsangana ho fanatsarana ihany koa.